တရား နှင့် ဂါထာတော်များ Archives - Latest Myanmar News
လေးဆူဓာတ်ပုံ ပြသနာ ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်ဘုရား၊ သိလိုရေးနှင့် မေးလျှောက် အပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၌ ဤကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရား လေးဆူတို့၏ ဓာတ်တော်များ ရှိနေသည်ဟု မှတ်သား ဖူးပါ သည်။ သို့ရာတွင် တရားဟော ဆရာတော်တစ်ပါး ဟောကြားသော တရားတစ်ခု၌ “ရွှေတိဂုံဘုရားအတွင်း ကကုသန် […]
နွမ်းပါးသူ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူတို့ လုပ်နိုင်သော ကုသိုလ်
ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ပြုသင့်တဲ့ ကုသိုလ် အရှင်ဘုရား… ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်သူများ ၊ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲ ဘုရား-? အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ… ပုည ကြိယ […]
ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံလျှင် ပြုသင့်သော ကုသိုလ် ၁၀ မျိုး
ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများပြုသင့်တဲ့ ကုသိုလ် အရှင်ဘုရား… ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခမတတ်နိုင်သူများ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့် အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲ ဘုရား-? အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ…ပုည ကြိယ ဝတ္တုဆယ်မျိုးကောင်းသောအကျိုး၏ တည်ရာဖြစ်၍ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး […]
အရာရာကိုအောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင်ထားပါ
February 23, 2020 Latest Myanmar News 0
မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင်ထားပါ အရာရာကိုအောင်မြင်စေသောဂါထာ မဟာမုနိ မဟာပုညော မဟာတေဇော မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒိပေါ မယှံနာထော မယှံဒေတု မဟာ ဇယော (၉ခေါက်ရွတ်) စီးပွါးလာဘ်လာဘ တိုးတက် စေသောဂါထာ မဟာမုနိ မဟာပုညော မဟာတေဇော မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒိပေါ မယှံနာထော မယှံဒေတု မဟာ […]
ဆင်းရဲသော်လဲ ပြုနိုင်သော ကုသိုလ် ၁၀ မျိုး
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ပြုသင့်တဲ့ ကုသိုလ် အရှင်ဘုရားဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်သူများ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်း လို့ အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲဘုရား။ အဲ ဒီ လို အ ခြေ အ နေ မျိုး မှာ […]
တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်းလောက်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေရရှိသွားနိုင်မည့် နေနည်းများ ၁။ နိုးနိုးချင်း…. မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမသည့်အတိုင်း နိုးနိုးချင်း ထထချင်း အနေအထား မပြောင်းမရွေ့ပဲ ဝင်လေ ထွက်လေလေးကိုသတိကပ်မှတ် နေလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တွေက တစ်စက္ကန့်မှာကုဋေ တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ရရှိသွားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို သောကဖြင့် နိုးထခြင်းမဟုတ်တော့ သည့်အတွက်မင်္ဂလာတရားဖြင့်စတင်သည့် နေ့လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၂။ လှုပ်လှုပ်ရွရွ […]
တစ်နေ့မနက် ရဟန်းတစ်ပါးဟာ လမ်းလျှောက်ပြီး ရွာထဲက အိမ်တွေမှာ ဆွမ်းခံကြွလာတယ်။ စောစောစီးစီး အရက်သောက်ပြီး အတော်လေးမူးနေတဲ့ အရက်သမား တစ်ယောက်ဟာ အဲဒီရဟန်းကို မြင်တာနဲ့ ဘေးနားက အတူလိုက်ပါသွားရင် ရဟန်းကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုပါတော့တယ်။ အမူးသမားဟာ ရွာမှာ အဆိုးဆုံး လူမိုက်တစ်ယောက်မို့ ရွာသူရွာသားတွေဟာ ကြောက်ပြီး ဘာမှ မပြောရဲကြဘူး။ […]
လွန်စွာထူးကဲ အစွမ်းရှိသည့် အဌာနမေတံ ဂါထာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရန်
February 15, 2020 Latest Myanmar News 0
အသိအမှတ်ပြုခံချင်တယ် မိမိအပါအဝင် လူတော်တော်များများဟာ သူတပါးကို အလွန် ဂရုစိုက်တတ်သလို သူတပါးက ဂရုစိုက်တာကို လည်း လွန်စွာကျေနပ် တတ်ကြပါတယ်။ကလေးဘဝ ထဲက ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်စေချင်လွန်းလို့ ငိုပြလိုက်၊ စိတ်ကောက်ပြလိုက်၊ ရီပြလိုက်၊ ခြေ ဆောင့် ပြလိုက်နဲ့ သူတပါး ကိုယ့်အပေါ် ဂရုစိုက်အောင် နည်းမျိုးစုံလင်စွာနဲ့ ပြုမူခဲ့ကြပါတယ်။ […]
စကားမုန်တိုင်းကို ရင်ဆိုင်နည်း ၁။အပြောအဆိုခံရတဲ့အချိန် ငါ့ မူလစိတ်လေး အပြောင်းအလဲ မဖြစ်စေရဘူး။ ဒေါသမဖြစ်စေရဘူး။ ၂။မကြားဝံ့ မနာသာ စကားတွေ ငါ့ပါးစပ်က မထွက်စေရဘူး။ ၃။ပြောလာတဲ့သူအပေါ် အကျိုးလိုလားစိတ်ရအောင် ငါပြုစုပျိုးထောင်မယ်။ ကြိုးစားမယ်။ ၄။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို မေတ္တာရဲ့ အာရုံအနေထားပြီး မေတ္တာပွားမယ်။ ၅။ထိုမေတ္တာဘာဝနာကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ မေတ္တာခိုင်မြဲအောင် သတ္တဝါအားလုံးအပေါ်မှာ […]